Fiainana antoko : famitahan-tena ny kongresim-paritry ny HVM tao Toliara | NewsMada
Fiainana antoko : famitahan-tena ny kongresim-paritry ny HVM tao Toliara
Par Taratra sur 19/06/2017
Voalaza fa nahavory mpizaika hatrany amin’ny 10 000 ny kogresim-paritry ny HVM, natao tao Toliara ny faran’ny herinandro teo. Nisy ny fidinana an-dalambe nataon’izy ireo, nameno ny lalana tamin’izany ambara fa fampisehoan-kery izany. Tsy mihatra any amin’ny faritra tahaka ny any Toliara izany ny tsy fahazoana manao hetsika na fidinana an-dalambe mandritra ny volana jona ka nanao ny saim-pantany ity antokon’ny fitondrana ity. Eto an-dRenivohitra ihany ny fandrarana tsy mahazo manao hetsika politika ?
Tena naneho ny heriny tokoa manoloana izao fahantram-bahoaka izao ny HVM, indrindra fa ny fahantran’ny vahoaka sy ny asan-dahalo any amin’iny faritra atsimo iny. Nandany volabe antapitrisany amin’ny fitaterana ireo mpizaika hatrany ambanivolo rehetra any ka hatrany amin’ny faritra hafa. Mbola eo ny fiantranoana sy ny sakafo… Tsy mahagaga raha miiba avokoa ny zava-bitan’izao fitondrana HVM izao tao anatin’ny telo taona mahery nitondrany.
« Raharaha andramena » sy ny « Raharaha Claudine »…
Famitahan-tena izao ataony izao satria efa tsy mitodika any amin’io antoko io sy izao fitondrana izao intsony ny vahoaka. Mety noho ny tombontsoa manokana sy ny vola atao fafy katrana no maharesy lahatra ny sasany amin’izy ireo tamin’iny kongresim-paritra iny.. sy ny mbola hatao any amin’ny faritra hafa, toy ny any Mahajanga ato ho ato.
Etsy andaniny, aza hadinoina fa tsy manana depiote HVM, na iray aza, izao fitondrana izao raha vao tonga teo amin’ny fitondrana. Tsy vitan’izany fa tafiditra amin’ny raharaha samihafa ireo mpikambana sasany na ny mpanohana azy nandritra ny telo taona. Teo ny « Raharaha andramena » na fanondranana an-tsokosoko harem-pirenena, toy ny « Raharaha Singapour » izany. Eo koa ny fanomezana tombony ilay mpandraharaha akaiky ny HVM, Razaimamonjy Claudine, amin’izao fitanana am-ponja vonjimaika azy izao, noho ny fanodinkodinam-bolam-panjakana ahina ho nataony.
Araka izany, tena hafa mihitsy ny ambara sy ny atao. Mpitari-bato vilam-bava ny HVM sady mamita-tena koa ?